The Irrawaddy's Blog: ဦးမြတ်ခိုင်ရဲ့ မော်နီတာဂျာနယ်ကို ဘာကြောင့်ပိတ်
ပြေတီဦးနဲ့ အိန္ဒြာကျော်ဇင်တို့ရဲ့ မပြီးနိုင် မစီးနိုင် လက်ထပ်ပွဲထဲက တခုဖြစ်တဲ့ ညစာစားပွဲ ဓာတ်ပုံတွေကို စိစစ်ရေးမတင်ဘဲ ဖော်ပြလိုက်လို့ အပိတ်ခံရတာလို့ ဆိုပါတယ်။ ဦးမြတ်ခိုင်ရဲ့ ဖေ့စ်ဘုက ဓာတ်ပုံတွေနဲ့ အပိတ်ခံရတဲ့စာမျက်နှာတွေကို ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။
မပြီးနိုင်မစီးနိုင်တဲ့ မင်္ဂလာဆောင်တော့မဟုတ်ပါဘူး ပုံမှန်လေးလုပ်သွားတာပါပဲ ဒါပင်မဲ့ သူတို့ ကိုကျတော့လူစိတ်ဝင်စားသွားလို့ သတိထားမိသွားကြတာပါ တချိူ့ သူတို့ ထက်များတဲ့ မင်္ဂလာဆောင်တွေကိုတောင်မြန်မာပြည်ကလူတချို့ လုပ်နေကြတာပဲလေ ဥပမာ ဇော်ဝင်းထွတ်သားအိတိုးဆို9ပွဲလောက်လုပ်သွားတာပဲလေ ပန်းတွေကိုတရုတ်ပြည်အထိတောင်သွားဝယ်ကြတာ လူသိပ်စိတ်မ၀င်စားလို့ ပေါ်ပြူလာမဖြစ်သွားတာပါ ..............
I see the ugly legs of Myanmar actress.
We all don't know about ugly legs due to wear the Myanmar longyi or pants while shooting the movie.
soung lay said... :
ပြေတီဥိး တော့ ဒူး မဲ ကြိး နဲ့၇ ပြိ ဟေ့
ဦးမြတ်ခိုင်ရဲ့ ဖေ့စ်ဘုခ် လိပ်စာလေး သိပါရစေ။
facebook အကောင့်ရှိရင် အထဲဝင်ပြီး Myat Khine လို့ ရိုက်ရှာရင် တွေ့နိုင်ပါတယ်။